Wararka Suuqa Maanta Ee Ku Saabsan, Sergio Aguero, Lionel Messi, Diego Carlos, Achraf Hakimi.
Home Wararka Wargeysyada Wararka Suuqa Maanta ee ku saabsan, Sergio Aguero, Lionel Messi, Diego Carlos,...
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 7 April
Sergio Aguero ayaa diyaar u noqon lahaa inuu ku biiro kooxda Tottenham xagaagan, sida laga soo xigtay The Telegraph ,dhibna uma arko haddii Spurs ay seegaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda. The Telegraph
Daafaca dhexe ee RB Leipzig Ibrahima Konate ayaa laga yaabaa inuu dhawaan isku arko bartanka xafiiltan taariikhi ah, madaama Manchester United ay diyaar u tahay inay kula dagaalanto Liverpool saxiixiisa, Eurosport
AC Milan ayaa dooneysa inay la soo wareegto daafac buuxa si ay u horumariso waxayna aqoonsadeen seddex bartilmaameed oo ay ku buuxinayaan baahidaas, sida uu qoray wargayska Calciomercato .
Matias Vina (Palmeiras), Junior Firpo (Barcelona) iyo Elseid Hysaj (Napoli) ayaa loo maleynayaa inay yihiin beddelka raadinta ballaaran ee Rossoneri. Calciomercato .
Liverpool ayaa looga digay in Mohamed Salah uu eegi doono inuu dhaqaaqo hadii “dalab ka fiican kooxda uu yimaado”, iyadoo Xidighii hore ee reer Masar uusan la yaabin hadalka
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Federico Bernardeschi iyo daafaca Milan Alessio Romagnoli ayaa qarka u saaran inay ku lug yeeshaan heshiis isku bedel xagaaga – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Qeybta hore Suuqa kala iibsiga 7 April
Milan ayaa ku iibin karta Rafael Leao aduun dhan 40 milyan oo euro (£ 34m / $ 47m) xagaagan – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Arsenal ayaa qorsheyneysa inay soo gudbiso dalab ay ka gudbineyso daafaca Inter Achraf Hakimi – sida laga soo xigtay AS .
Alessandro Bastoni ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo Inter – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Weeraryahanka Villarreal Gerard Moreno ayaa waxaa xiiseynaya Atletico Madrid – sida ay qortay Marca .
Tottenham ayaa diyaar u ah inay u dhaqaaqdo xiddiga RB Leipzig Marcel Sabitzer – sida laga soo xigtay Football Insider .
Jose Mourinho ayaa, sida laga soo xigtay La Razon , weydiistay Tottenham inay lasoo wareegto Diego Carlos xagaagaan. La Razon ,
Sergio Aguero ayaa, sida laga soo xigtay wargayska Standard Sport , waxa uu xiiso u muujiyay ikhtiyaarka ah inuu ku biiro Chelsea. Standard Sport ,
Manchester City ayaa noqotay kooxdii ugu dambeysay ee ku soo biirta loolanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sheffield United Sander Berge, sida ay warinayso Voetbal24.
Manchester City ayaa weli isha ku heysa inay heshiis la gaarto Lionel Messi haddii uu ka tagayo kooxda Barcelona, ​​sida ay qortay Marca.
Inter ayaa lagula taliyay inay joojiso xiisaha ay uqabto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kante, taa badalkeedana ay diirada saarto sidii ay ku heli laheyd kubadsameeye Leon Goretzka. Goal
Ilaa iyo sagaal ka mid ah kooxda koowaad ee Chelsea ayaa iib ah xagaagan iyadoo Thomas Tuchel meesha ka saaray kooxdiisii, sida ay warinayso Mirror .
West Ham waxaa ka go’an inay heshiis joogto ah ka hesho Jesse Lingard oo ka socda Manchester United, sida ay warinayso Sky Sports .
Previous articleJuventus iyo Ac milan oo samaynayaan kala bedelasho ciyaartooy.
Next articleMustaqbalka mohamed Salah oo mugdi soo galay iyo Liverpool welwel dhexda kaga jirta.